မျက်စိစွန်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ - Hello Sayarwon
Dr. Thant Zin မှ ရေးသားသည်။4ရက် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
မျက်စိနာခြင်းဆိုတာ မျက်ခွံအတွင်း၊ ဒါမှမဟုတ် အပြင်မှာ အနာဖုလေးဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဟော်ဒီယိုလမ်လို့လည်း ခေါ်ဝေါ်ပါတယ်။ ဒီရောင်ရမ်းခြင်းဟာ ဂလင်းကို ပိတ်ဆို့မိခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
မျက်စိစွန်ခြင်းဟာ ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် မျက်စိတစ်ဖက်တည်းမှာ အနာတခု ဖြစ်တတ်ပြီး မျက်စိတဖက်တည်းမှာပဲ အနာတစ်ခုထက်ကျော်ပြီး မျက်စိစွန်နေရင် ကျန်တဲ့တစ်ဖက်မှာပါ ဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။
– အပြင်ပိုင်းစွန်ခြင်း။ မျက်တောင်နားမှာ အစက်ကလေးဖြစ်လာရာကနေ နီရဲရောင်ရမ်းပြီး နာလာပါတယ်။ ရက်နဲ့ချီကြာလာရင် ပေါက်သွားပြီး အနာကျက်သွားပါတယ်။ အပြင်ပိုင်းစွန်ခြင်း အများစုဟာ အချိန်သိပ်မကြာဘဲ သူ့ဖာသာ ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ မျက်စိအပြင်ပိုင်း စွန်ခြင်းဟာ အတွင်းပိုင်းစွန်ခြင်းထက် ပိုပြီးနာတတ်ပါတယ်။ အဆီဂလင်း၊ မျက်တောင်မွေးညှင်းပေါက်၊ အေပိုခရိုင်းဂလင်း စတာတွေ ပိုးဝင်ရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
– အတွင်းပိုင်းစွန်ခြင်း။ မျက်ခမ်းအတွင်းသားမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နီရဲရောင်ရမ်းပြီး နာကျင်နေတတ်ပါတယ်။ ပိုးဝင်ခြင်း ပျောက်ကင်းသွားရင် မျက်စိစွန်တဲ့နေရာဟာ လုံးဝပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတရံမှာ အရည်အိတ်ကလေးအဖြစ်၊ အဖုလေးအဖြစ် ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းစွန်ခြင်းဟာ မီဘိုမီးယန်းလို့ခေါ်တဲ့ဂလင်းတွေကို ပိုးဝင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Staphylococal ဘက်တီးရီးယားများဟာ လူ့အရေပြားေပါ်မှာ ပုံမှန်နေထိုင်တဲ့ သက်ရှိတွေပဲ ဖြစ်ပြီး တစ်ခါတရံမှာတော့ မျက်စိစွန်ခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓါပေါ်မှာ ဘက်တီးရီးယားပေါင်း သန်းနဲ့ချီနေထိုင်ပြီး လူကို အန္တရာယ်မပေးပါဘူး။ တစ်ခါတရံမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေ အလွန်အမင်း ပေါက်ပွားလာတဲ့အခါ နာကျင်တဲ့ ဝက်ခြံတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားများက ဆဲလ်အသေများကိုစားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
– မျက်ခွံပေါ် (သို့) အတွင်းတွင် အဖုဖြစ်နေခြင်း
– မျက်လုံး၊ မျက်ခွံများ နီရဲပြီး နာကျင်ခြင်း
– မျက်ခွံအနားသတ် ခြောက်သွေ့မာကြောခြင်း
မျက်စိစွန်ခြင်းဟာ တပတ်ထက်ပိုကြာလာတဲ့အခါ၊ ရောင်ရမ်းတဲ့နေရာဟာ နာကျင်လာတဲ့အခါ၊ မျက်နှာရဲ့တစ်နေရာရာမှာ သွေးထွက်ခြင်း၊ ပိုးဝင်ခြင်း ဖြစ်လာတဲ့အခါ၊ အမြင်အာရုံပိုမို ဆိုးရွားလာတဲ့အခါ၊ မျက်စိနဲ့ မျက်ခွံနီရဲလာတဲ့အခါ ဆရာဝန်ပြသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Stye – NHS Choices. nhs.uk/conditions/stye/Pages/introdution.aspx. Accessed in February, 2017.
Eye stye – Causes & treatments of styes on eyelids – Boots WebMD. m.webmd.boots.com/a-to-z-guides/stye-symptoms-diagnosis-treatment. Accessed in February 26, 2017.
Stye: causes, Prevention, and Treatment – Medical News Today. www.medicalnewstoday.com/articles/220551.php. accessed in February 26, 2017.